Home World News	Maraykanka oo dib u cusbooneysiiyay baaqyada lagu xoojinayo awoodda wareejinta ee Sudan
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Khamiistii ayaa ku celisay baaqyada lagu wareejinayo awoodda xukuumadda rayidka ah waxayna tilmaamtay in hanaanka hab-nololeedka ah ee xiriirka labada waddan iyo Sudan laga saarayo liiska argaggixisada dib loo eegayo iyadoo lagu saleynayo horumar siyaasadeed.
Suudaan Khamiistii 11-kii Abriil ayaa la afgambiyay madaxweynaha Omer al-Bashir, oo hadda la xiray. Si kastaba ha ahaatee, ciidanka guud ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay sii joogaan awood muddo laba sano ah.
“Dowlada Mareykanka ayaa soo dhaweysey hanaanka xilka looga qaadey madaxweynihii hore oo ku salaysan Nabad Iyo Dimuqraadiyad oo ay hogaaminayaan dadka rayidka taasi oo muujisey kala duwanaashaha dadka reer sudan’.,ayuu yiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Morgan Ortagus.
WARARKA CAALAMKAwararka maanta
Sacuudiga oo Wacad ku Marey Iney Qaadi doonaan...